Wayyaanee tplf : Dhaamsa qeerroo barattoota yuunivarsitii Adaamaa irraa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWayyaanee tplf : Dhaamsa qeerroo barattoota yuunivarsitii Adaamaa irraa
Wayyaanee tplf : Dhaamsa qeerroo barattoota yuunivarsitii Adaamaa irraa
Sababa mirgi ummata Oromoo haa kabajamu, ajjeechan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu jechuun hiriira mormii gochaa turreef bulchiinsi yuunivarsitii Adaamaa haala nama gaddisiisun barattoota 18 barnoota isaanii irraa #dismiss(ari’eera). Barattoonni ari’ataman kunniin barattoota ciccimoo quuqama saba isaanif qabaniidha.
Barattoonni Oromoo yuunivarsitii #Adaamaa keessatti argamnu guyyaa boruu irraa eegaluun hanga barattoonni mootummaa abbaa irree wayyaanetiin ari’aman barnoota isaanitti deebi’anitti guutumaan guutumatti barnoota dhaabnee gaaffii mirgaa keenya itti fufuuf waan murteessineef barattoonni Oromoo yuunivarsitii Adaamaa keessatti argamtan guyyaa boruu irraa eegaluun daree seenuu dhaabdanii barattoonni obboleewwan teenya nu biraa ari’aman akka gara barnootaatti deebi’aniif falmii akka goonu dhaamsa isiniif dabarsina.
Barattoonni Oromoo yuunivarsitiilee
#Maddawalaabuu fi kanneen biroo keessatti argamtan obboleewwan teenya diinni barnoota irraa ariite barnoota isaanitti akka deebi’aniif akkasumas gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa eegalle saboota biroo of cinaa hiriirsinee jabeessinee akka itti fufnu qeerron Oromoo yuunivarsitii Adaamaa waamicha Oromummaa isiniif goona.
Ilmaan Oromoo dhaamsi kuni isin gahe karaa bilbilaan, sms fi kkf waliif dabarsaa.
Barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan barnoota irraa ari’uun ol’aabtummaan murni bicuu wayyaanee TPLF kan duruu caalaa daran hammaachaa dhufuu isaa waan agarsiisuf ilmaan Oromoo ol’aantummaa murna bicuu hambisuuf qabsoo eegalle daranuu jabeessinee akka ityi fufnu qeerron Oromoo yuunivarsitii #Adaamaa dhaamsa isiniif dabarsina.”
Gimgamaan ADWUI Abdi Ileey fi Liyyuu Polisii laalchisee qurrama Oromoo irraa ka’u dhaggeeffatee fudhateera, dhiifamas gaafateera jechuu dhageenye. Federaal Polisiin Wayyaanee garuu tarkaanfii faallaadhaaf of qopheessuu isaa labse. Abdi Ilee fi Liyyuu Polis, akkasuma janaraalota TPLF kan ummata keenya 700,000 buqqisiisan seeratti dhiheessee qorachuu mannaa Qeerroo abbaa qabsoo Oromoo haleeluu filate. Olaantummaa TPLF ibsuuf kana caalaa ragaa maaltu jira?????
Wanni argaa jirru ifaa dha. Keessi ADWUI gamaaggama guyyaa 18 booda ammas bukoo dha. Wayyaanee TPLF kan duraa caalaa daranuu of tuulummaan ishii itti hammaachuu argaa jirra. Daranuu ”maal abbaa keessanii fiddu?!” jechuutti jirti. Waadaan Gareen Lammaa ummataaf seenu tahe jedhamee gufachiisuuf TPLFiin itti duulamaa jira. Ummanni kan duraa caalaa amma qabsoo murteessituuf of qopheessuun dirqama. “JIRRA!!” jechuun amma!
Oduun ‘Ethiopianreporter’ poolisiin Federaalaa ‘Qeerroo’ irratti sakattaa/qorannaa gadi fagoo geggeessuu eegale jetti.
Ma’ikalaawii cufanii Oromiyaa guutuu ma’ikalaawii godhuu yaadan moo akkam dubbiin?
Jarri kun fayyaa waan qaban hin fakkaatan. QEERROO jechuun Oromoo mirga isaa kabachiisuuf qabsoorra jiru hunda jechuu dandeenya. Yoo akka dargaggoo qofatti fudhannes yoo xiqqaate dargaggoo milyeena 20 ta’utu Oromiyaa keessa jira Qeerroon. Akkam gootee sakatta’uufi laata?
Akka heera mootummaattis nagaya naannoo Oromiyaa kan eegu poolisii MNO Oromiyaati. Humni Federaalaa kan seenuu dandayu yoo MNO gaafatee fi hayyame.